Izandiso zezinwele zangokwemvelo ezingu- #1 Isiqeshana se-Clip-Ins: Thenga izinwele ze-Kinky Curly
Izindandatho zezinwele ze-Kinky Curly ze-Quality Quality Kwabesifazane Bemibala
Uyemukelwa Ezandisweni Zami Yemvelo Yemvelo, zonke izikhwebu, ama-ins & ama-wigs enzelwe ukusetshenziswa okuhlala isikhathi eside ngenkathi kulondolozwa ubuningi obukhulu ukuqinisekisa ukugcwala. Ngemuva kweshumi leminyaka lokunikeza i-weave ehlukile yabesifazane bemibala, Kube ngumsebenzi wethu ukufeza ukubiza ngaphandle kokuyekethisa ubukhulu bokunqotshwa kwezinwele ngakunye.
UMUNYE uhambisa izinkulungwane zezandiso ngezinwele zemvelo kubantu besifazane emhlabeni jikelele, ukuthi bonke bavumelana ngezinto ezimbili. Bafuna izibopho ezinhle kakhulu nezinkonzo zamakhasimende eziphezulu ezivela enkampanini ezisekela kuzo zonke izigaba zabo zokukhula. Silungiselela ukuthayipha i-3 futhi thayipha izinwele ze-4 imibala.
Izinga eliphezulu le-Natural Clip-In Extensions ephezulu
Kunezindlela eziningi ongawabulala futhi unikeze isibuyekezo esidingekayo kakhulu ekubukeni kwakho ngezinwele zemvelo. Ukufaka iziqeshana zethu ezinempilo, ngokushesha ungatshela ukuthi usebenzelana neziqeshana zekhwalithi, zonke iziqeshana zethu zifanelana kahle nezinwele ze-kinky curly. Lezi zinto ziqinisekile ukuthi zikushiye uzizwe ezimangalisayo ngoba zenezela ivolumu enhle kumatty wakho. Sijabule ukukuqala ohambweni lwakho; Zonke izingqungquthela zethu zihlukumezeka nawe engqondweni! Ngakho-ke anikele ngemikhiqizo ngezitayela ezahlukene nokubukeka okuphelele kuwe. Qinisekisa ukuthi ujoyine iklabhu ye-VIP ukuze ufunde ngazo zonke izinto zethu ezintsha nezibuyekezo.
Izinwele ze-Premium Kinky
Our Izandiso zezinwele ze-afro kinky kungabesifazane abanemibala. Ukuthungwa kuyi-strand ye-4 enamandla ethuntekile. Izinqwaba zethu nama-clip-ins, ama-wigs nokuvalwa kugcwele futhi okuqinisekile ukugcizelela.
Iningi lase-Afrika laseMelika elisebenzisa ama-kinky textures ukuze lihlangane nezindawo ezikhona. Le nqubo yokufaka izibopho zethu ikhululekile futhi iphelele kuzo zonke izikhathi. Imikhiqizo yethu ayikho kuphela yekhwalithi ye-premium ehlala isikhathi eside, kodwa futhi senze amakhasimende ethu ku-Instagram atshele ukuthi athole izibopho eziyisithupha iminyaka. Isisebenzi sethu sisebenzisiwe, Yebo, sithole lokhu.
Amaklayenti ethu asitshele ukuthi bathole kulula ukukhulisa izinwele zabo zemvelo besebenzisa izandiso. Uhambo lokuqinisa izinwele zakho nokubukeka kahle kakhulu inqubo. Yingakho lapha kuYI kuyisimo sethu sokusiza amakhasimende ethu abukeke futhi azizwe emuhle.
Kulinganiselwe ngo- 4.64 aphume 5
I-Kinky Curly Clip-Ins
I-Perm Yaki Clip-Ins
Kulinganiselwe ngo- 4.56 aphume 5
Siyazi ukuthi sigcina izinyanda ezinhle kunazo zonke emhlabeni ngoba amakhasimende ethu a-oda emhlabeni wonke. Nomaphi lapho intokazi efuna ukubukeka kwayo kuqediwe ngama-curls akhazimulayo abukeka emvelo futhi emangalisa, ungaqiniseka ukuthi usebenzise umkhiqizo esiwugcinayo. Kuyinto imidwebo enhle kakhulu yekhwalithi eliphezulu izinwele ze-kinky eziwephukile kanye namakhasimende e-intanethi.
Kuzobukeka sengathi izinwele zakho ziningi ama-curls ashaqa ebusweni bakho uma usebenzisa izandiso zezinwele ze-curly-in izinwele. Ziza ngobude obuhlukahlukene nobuciko.
Ukuthenga i-clip-ins evumela ukuhlanganisa izinwele zemvelo nezandiso kwenza isitayela sakho sigcwele futhi sibuyekezwe konke ngesikhathi esisodwa. Sinikeza ukugcwalisa okuphelele kwazo zonke ukuthungwa, ubude, nokuhlukahluka ongase ufune. Ukusebenzisa i-clip-ins ukufihla isigaba esikhulayo se-cut, noma isigaba esingenakwenzeka sokuguquka kusuka ezinhlokweni eziqondisiwe kuya ekukhuleni kwemvelo kwenziwa lula kakhulu. I-hair clip-ins ibuye ivumele izinwele ukuba zibheke kalula ngezindlela ezihlukahlukene. I-Ponytails, i-back-back, ne-braids nayo ibuye izibopho ezinikezwa kuwebhusayithi. I-Clip-ins yindlela ephelele yokushintsha i-hairstyle yakho ngaphandle kokuchitha isimo esihle sezinwele zakho zangempela. Ukugcina i-kinky curly yakho Remy virgin izinwele izibopho amadili ukudonsela emuva noma ukuqondiswa nsuku zonke ukuze ubukeke obunako kungabangela ukulahlekelwa izinwele noma ukulimala. Uma usebenzisa ama-curly clips, ungabheka ngendlela emangalisayo futhi uvikele izindawo zakho kusuka ekugqokeni nasezintweni zansukuzonke ezingabangela ukuthi ziqhekeke.
Ngakho uma une-4A, i-4B, i-4C bese sikukhumbule. Siyaqonda izinkathazo eziningi ukuze sibe nomculi obukeka kahle kakhulu, cabanga ngokuhlola izinto zethu, ngakho-ke bona ukuthi yini efanelana nawe ngokuphelele. UMUNYE ngu-100% umnikazi omnyama ophethwe ngumuntu omnyama futhi osebenza njengamanje njengamasevisi angamakhasimende emazweni angaphezu kwe-100 emhlabeni jikelele ngokuthunyelwa kwamanye amazwe.
Kube ukugxila kwe-MNHE ukwenza abesifazane besimbala babonakale bephawuleka ngezibopho ezivela ku-10 ", 12" 14 ", 16", 18 "20" 22 ", 24" 26 "28" 30 "elula isitayela. Ladies bathi baye bathola ukuthi imikhiqizo yethu yilokho abakudinga ukubulala! Hlola lolu hlobo olusha lwe-weft classic, "Iqiniso mayelana nezinwele ze-afro ezinama-curly. "
MNHE Live Instagram Okuphakelayo
@jastanae 😍😍😍 ubuhle igama lakhe !!! ・
Izama ukufana nalokhu lonke ihlobo '19 LOL 😝 ...
Hahahahaha !!! Repost @campuslately · · ·.
Ama-Divas nama-gents ayeka ukufa izinwele zakho ezimpunga. Yamukela ...
Mina njalo LOL. Kumele ngiphume ngempela kuTha ...
Yeall siphethe cishe ku-2019. Khumbula ...
Imiphi imicabango yakho? Ingabe lokhu kunembile noma i-naw?
Ngabe basazenza kanjena?
Joyina i-VIP Club ku- #mynaturalhairextensions To ...